Madaxweynaha Jubaland iyo danjiraha UK oo Kismaayo ku kulmay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubaland iyo danjiraha UK oo Kismaayo ku kulmay
Madaxweynaha Jubaland iyo danjiraha UK oo Kismaayo ku kulmay
Kulankan oo ahaa mid diirada lagu saarayay tageerada ay dowlada UK siiso Jubaland gaar ahaan adeegyada bulshada, iyo taakulaynta dhinacyada amaanka iyo horumarka.
Inta uu kulankan socday waxaa la isla soo qaaday sidii loo joogtayn lahaa xiriirka labada dhinac isla markana ay u bilaaban lahayeen waxyaabaha ka dhiman mashaariicda ay Ingiriisku ka hirgalinayaan deegaanada Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland iyo danjire Divid Concar, waxaa ay booqdeen, dhul laga dhisayo xarun ay yeelanayaan sirdoonka Jubbaland oo ay maalgalinayso dowlada Ingiriiska, iyadoo safiirku uu balan qaaday in ay dadaalkooda isugu gaynayaan sidii Soomaaliya ay uga soo kaban lahayd waayahii burburka, isla markana ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd.
Waxaa kale, oo mas’uuliyiintu ay si wadajir ah ula kulmeen ururada bulshada qaybahooda kala duwan, iyadoo ay isla soo qaadeen qaabka ay u socdaan mashaariicda kala duwan ee UK ay ka hirgalinayso Jubbaland.
Previous articleR/Wasaare Khayre oo xarigga ka jaray Xafiisyo lagu qabto Cabashooyinka dadweynaha
Next articleFaah faahin ka soo baxaysa Qarixii ka dhacay magaalada Baladweyne